Aqoonkaab Kansarka hunguriga | Aqoonkaab
Hungurigu waa xubin qaali ah kaasoo ka qayb qaata gaarsiinta quudka qaybaha kala duwan ee dheefshiidka. Tuuubadaan oo soo qaada cunnada aynu liqno ayaa u gudbisa caloosha halkaaso cunadda lagu qaso dheecaanada kala duwan ee laga soo daayo gidaarada caloosha si looga nadiifiyo ilmaqabatada iyo jeermiska looguna diyaariyo si in lagu dheefshiido mindhicarada. Kaankarada ku dhacda hunguriga ayaa saamayn karta qayb kasta oo ka mid ah hunguriga sida bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa. Kansarka hunguriga ayaa ku dhici kara qaab dhismeedyada hoose ee hunduriga taasoo ka bilaaban karta meel walba oo hunguriga kamid ah. Nooca kaankarada kudhacda hunguriga ayaa u badan kuwa halis ah ee faafa.
Laba nooc ayaa ugu caansan kaankarada ku dhacda hunguriga. Nooca koowaad ayaa ah mid bilaabma xuubka ama dahaarka hunguriga kaasoo badanaa lagu arko qaybta dhexe ee hunguriga. Noocaan oo oo looyanaa squamous cell carcinoma. Nooca koowaad ayaa 70% kabadan nooca labaad.
Nooca labaad ayaa ku dhaca qanjirada yaryar ee hunguriga kuwaasoo soo saara dheecaamo kala duwan oo leh faa’idooyin badan, dheecanadaan ayaa ka qayb qaata joogteynta nadaafada hunguriga, ilaalinta inaysan cunuda dhaawac ama xoqniin u geysan hurguriga iyo inay cunada maraysa hunguriga kadilaan jeermiska la socda. Noocaan ayaa loo yaqaana esophageal adenocarcinoma.
Maxaa sababa kansarka hunguriga
Inta badan kaankarooyinka ku dhaca qaybaha kala duwan ee jirka malahan sabab rasmi ah oo loo aaneeyo, kansarka hunguriga waa mid ka mid ah kaankarooyinka aan la aqoon sababta rasmiga ah ee keentay. waxaase jira qodobo la aaminsan yahay inay ka qayb qaataan bilowga kaankarada sida cunitaanka cunno aad u kulul ama cabida biyaha aadka u kulul, isticmaalida qalabka cunada lagu kululeeyo ee loo yaqaano microwave, qalabkaan ayaa la aaminsan yahay inuu keeno noocyo badan oo kaankaro ah oo uu ka mid yahay kan ku dhaca hunguriga, sababta ayaa la aaminsan yahay inay tahay uumiga xad dhaafka ah ee uu ku kululeynayo cunnada. Qodobada kale ee ka qayb qaata bilowga kaankaradaan ayaa waxaa kamid ah cabidda sigaarka, khamrida, xaaladda laabjeexoo ah in qayb kamid ah cunnada caloosha kujirta iyo dheecaanku ay kor ugu soo noqdaan hunguriga taasoo ay keento markii uu dabco cinjirka udhexeeya caloosha iyo hungurigu, quudasho la’aanta qudaarta iyo cunooyinka fiberka leh ayaa sidoo kale loo aaneeyaa inay ka qayb qaaraan bilowka xanuunkaan.
Astaamaha kansarka hunguriga
Bilowga xanuunkani malahan wax astaamo ah oo u gaar ah. Markii uu gaaro heer uu ku fido ama uu dhaawac u geysto qaybaha ama unugyada kala duwan ee hunguriga ayaa waxaa macquul ah in ladareemo astaamo iyo calaamado ay kamid yihiin
Margasho iyo xanuun joogta ah maadama aysan cunadu si caadi ah u dhaafi karin hunguriga
Miisaanka oo dhaca
Abiteeytka oo yaraada
Baaritaanka xanuunkaan ayaa ah mid aad u sahlan waxaana lagu ogaan karaa iyadoo la adeegsanayo qalabyo kala duwan sida kuwa casiriga ah oo ay ka mid tahay tuubada lagu baaro uur kujirta ee loo yaqaano Endoscopy. Waxaa kale oo lagu baari karaa raajada ayadoo bukaanka lasiinayo khadda loo yaqaan Barium taasoo sahal ka dhigaysa in la arko meesha sida gaarka uu usaameeyay xanuunkani. Xanuunkaan ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa iyadoo cad laga jarayo hunguriga si loo xaqiiqsado unugyada kaankarada ah ee ku jira cadkaasi.
Daaweynta xanuunkaan ayaa ku xiran hadba heerka uu gaarsiisan yahay iyo inta ay le’egtahay saameyntiisu. Hadii uu xanuunkani ku faafo qaybaha kale ee jirta sida beerka, sambabada, maskaxda, lafaha iyo dhiigga waxay cadeynaysaa inuusan lahayn xal iyo daawo toona oo xiligaan loo hayo.
Hadii ay san jirin faafid guud ayna kooban tahay heerkiisa faafitaan waxaa kamid ah siyaabaha kala duwan ee wax looga qaban karo qalitaan iyo daawooyinka loo Qaato
Previous PostNiyad jab dhalmada kadib Next PostXasaasiyad